फेसबुकमा कसले के भने « Loktantrapost
फेसबुकमा कसले के भने
१२ असार २०७३, आईतवार ०९:३४
गोपाल काफ्ले ः–
सचेत नागरिकहरूको छद्मभेषमा उत्रिएका अचेतहरूले पत्रकारिता पेशाभित्र पनि बद्नाम गराउन खोजेका छन् । उनीहरूले भूमिगत शैलीमै भए पनि उठान गरेको विषय राम्रो छ, चिकित्सकहरूलाई प्रयोग गरिएको धम्कीपूर्ण भाषाहरू बाहेक । पत्रकारभन्दा पनि विज्ञापन प्रकाशन गरिदिने पत्रिकाका विज्ञापन प्रमुख वा सम्पादकलाई सोधेर तत्तत् मानिसलाई कठघरामा उभ्याउनु जरुरी छ । उठान गरिएका कुराहरूमध्ये चिकित्सकको कालो धन्दा सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको सन्दर्भ जोडेको कुराप्रति सायद धेरैको समर्थन रहला ।
एकराज प्रधान ः–
यहाँ ‘सचेत नागरिक’ भन्दा बढी सञ्चारमाध्यम ‘अचेत’ भएको देखिन्छ । या त सञ्चारमाध्यमलाई खुलेआम दुरुपयोग गरिएको छ । गुमनाम भएर पनि सचेत नागरिकले गरेको काम राम्रो हो, निःस्वार्थ भए । तर, कसैले स्वार्थका लागि चलाएको भए यो खतरा बन्न सक्छ ।
शम्भु दाहाल ः–
कुन कुन पत्रिकामा बिज्ञप्ति छापिएको ? तिनै पत्रिकालाई सोध्नु थाहा भई हाल्छ नि बिज्ञप्ति छापेको पैसा दिन को आयो, कस्ले पठायो ? बिना स्रोत त पक्कै छापिएन होला ? तर, तरिका गलत भए नि यो समूहको काम ठिक छ ।
सन्तोष अधिकारी ः–
सचेत नागरिक जोसुकै होस् । काम चाहिँ गतिलो गर्दैछ । है ।
गोपाल बस्नेत ः–
बिज्ञप्तिको पैसा जसले बुझाउँछ उहि हो सचेत नागरिकको नाइके र भाइ नाइके !
आचार्य प्रेम ः–
सचेत नागरिक समुहमाथि प्रशासनले निगरानी सुरु गरेको बुझेको छु । दर्ता नगरी गलत हर्कत गर्ने कथित सचेत माथि कारवाही जरुरी छ ।
लीला भण्डारी ः–
नागरिक समूह, नागरिक समाज भनेका आफुले आफैलाई ठूलो भनी टोपल्नेहरूको सङ्गठन होला ।
याम विमली ः–
छाप्न लगाएर सम्पर्कमा नआउनेको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुहोस्, अनि तपाईको विश्वसनियता अझ वढ्नेछ । नत्र फेरि पनि तपाईले केहि कुरा लुकाएको आभाष हुनेछ ।
गोपाल कुमार बस्नेत ः–
नक्कली डाक्टरहरूको सूचीमा मिसाएर बिर्ता सीटीका बरिष्ठ र लोकप्रिय डाक्टरको नाम मिसाउने कार्य घोर अन्यायपूर्ण र खराब नियतिको परिणाम हो । यसका लागि न्यायको ढोका ढक्ढकाउने छौँ ।
एसपी लुइँटेल ः–
यो सचेत नागरिक समूह भनेको कुनै द्रव्यलोभिको झुण्ड हुन सक्छ, उक्त विज्ञप्ति छाप्न लाउनेकोे जब पहिचान छैन ।
नारायण ढुङ्गाना ः–
गल्ती स्वीकार्ने भन्दा पनि गल्ती दोहोरिने कुरामा सचेत हुनु राम्रो हो ।
विशाल नेम्वाङ ः–
भुलबस भएको गल्ती लुकाउनु भन्दा क्षमा सहित नदोहोरियाउनु महानता हो । यसमा लाज मान्नु पर्ने कुरै छैन ।
प्रदिप परियार ः–
सचेत नागरिक समूह झापा नामक भूमिगत संस्था पत्रकारबाट परिचालन र संरक्षण भएको पाइयो । आतङ्ककारी जस्तो ब्यवहार देखाउनु दुःखद् हो ।
राजु श्रेष्ठ ः–
हैन झापाका पत्रकारले कहिलेबाट भूमिगत संस्था सञ्चालन गर्न थाले ?
(१२ असार २०७२ को लोकतन्त्र पोस्टमा प्रकाशित)
प्रसाई र कोइरालातिर हेर्दै ओलीले भने–‘काँकरभिट्टातिर बाहेक पार्टी हारेको छैन’
विर्तामोड, २९ भदौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाको मेचीनगरमा पार्टीले गत स्थानीय चुनावमा व्यहोरेको हारको